XOG: Kulan qarsoodi ah oo Muqdisho ku dhexmaray Shariif & Fahad Yaasiin + Ujeedka - Banaadisom
Home Wararka Maanta XOG: Kulan qarsoodi ah oo Muqdisho ku dhexmaray Shariif & Fahad Yaasiin...
XOG: Kulan qarsoodi ah oo Muqdisho ku dhexmaray Shariif & Fahad Yaasiin + Ujeedka
Ilo xog ogaal ah oo ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran ayaa inoo xaqiijiyay in ay magaalada Muqdisho kulan qarsoodi ah ku yeesheen Taliyaha Nabad sugida Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed caasimadda ku sugan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in kulanka intiisa badan diiradda lagu saaray xaaladda dalka iyo arrimihii ugu dambeeyay ee soo kordhay gaar ahaan khal khal amni ee dalka ka jira, balse xog hoose oo aan helnay ayaa sheegeysa in Fahad Yaasiin uu Shariif oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee miisaanka culus leh uu kala hadlay sidii uu ugu qancin lahaa guddiga Doorashooyinka Qaranka una taageeri lahaa.
Mid ka mid ah Xubnaha Xisbiga Himilo Qaran oo magaciisa diiday in la shaaciyo ayaa inoo sheegay in kulanka Labada mas’uul oo socda ku dhawaad 2-saac ay kaga wada hadleen marxaladda dalka uu ku jiro iyo sidada lagaga saaro karo shacabka wal walka ay ka qabaan mustaqbalka dalka iyo caqabadaha doorashooyinka ku gadaaman ee ka imaanaya musharaxiinta mucaaradka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo lagu tiriyo ragga ugu miisaanka culus, cudud ciidana ku leh dalka ayaa si weyn uga horjeeda qorshaha Dowladda Federaalka ku wajaheyso doorashooyinka dalka, wuxuuna marar badan ku goodiyay iney saarayaan Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo.
Dadka siyaasadda la socda waxay qabaan in madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay qar ka tuurayaan dalka,islamarkaana wadin xal lagu gaari karo doorasho loo dhan yahay.
Kulanka Shariif & Fahad Yaasiin ayaa ku soo aadaya xilli musharaxiinta mucaaradka ku sugan yihiin magaalada Garowe oo ka dhacaya shir looga hadlayo arrimaha dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ah, kaas oo ay soo qaban qaabisay Machadka Heritage.